Iindlela zeTekhnoloji: UkuGcina / i-MAM-Ukuboniswa kweendaba ze-NAB ngu-Broadcast Beat, Umsasazi osemthethweni we-NAB Show-NAB BONISA IXesha
ikhaya » Okufumaneka » Iindlela zeTekhnoloji: Ukugcina / i-MAM
UNamdev Lisman, uSekela-Mongameli oLawulayo, uPrimestream
Ukugcina kungumsebenzi wokubambelela kwizinto ude uzifune kwakhona, kwaye ngelixa oko kunokubonakala ngathi kukungaguquki kunye nokuhlala kwindawo, enyanisweni kuyaphikisana. Umzi mveliso ugcina uyila kwaye abaqulunqi bemxholo bahlala beqhubela phambili ukuhanjiswa komsebenzi wabo. Isiphumo kukuba ukugcinwa kunye nento oyifunayo kuyo kukujolisa ekuhambeni. Sibonile umjikelo wokuxinana kwabantu okuphuculiweyo kukhetho lokugcinwa kwesiseko sendawo kunye nesantya sokuphucula kunye nokufikeleleka. Njengoko itekhnoloji iqhubekile phambili ukuya phambili sibonile ukuba imboni iqhubela phambili ngezigaba ezimbalwa ekuqaleni iqala ngokwenza idigital, emva koko idlulisele ii-asethi kumajelo eendaba amatsha nakwiinkqubo njengoko ubuchwepheshe buqhubele phambili. Ngoku sibona idatha ihamba iye kwilifu apho ungqameko lomzimba luthintelwe kumthengi, kunye nayo yonke imiba ejikeleze ukuyigcina kunye nokuyihlaziya. Umzi mveliso usuka kwibhokisi yeetheyiphu okanye ifilimu eyayiphantsi kwedesika yomvelisi ukuya kuGcino lokuGcina oluhlala kwindawo ekungekho namnye kuthi onokubonisa kuyo.
Ngelixa izisombululo ezisekwe kwilifu zisekude ngokwasemzimbeni, ukuhamba komsebenzi omtsha kubopha lo mxholo kukuhanjiswa komsebenzi olindele ukubakho kwe-100%, ukufikelela kwangoko, ukukhangela, kunye nokubuyisa, kunye nokukwazi ukusebenza ngeendlela ezintsha zokudala imifudlana yengeniso. Kulapho i-media egcinwe khona ayanele yodwa. Imethadatha ejikeleze imithombo yeendaba kufuneka ifikeleleke, kwaye loo metadata inokuba yiyo nantoni na evela kumagama okukhangela, ukusetyenziswa, ukuguqulelwa kwe-AI yedatha edibeneyo yokufikelela kunye nokufikelela kwiiproksi ezinokusetyenziswa ngokukhawuleza ngelixa imidiya ephezulu yokudluliselwa kwemidiya isisiwa kwindawo yemveliso.
Konke oku kufuna a Ulawulo lweeMpahla (MAM) isisombululo esikukuphela kwento oyaziyo ngalo mzuzu, kodwa into oyenzileyo kwixesha elidlulileyo. Ngapha koko, i-MAM kufuneka idlale indima ebalulekileyo ekubanjweni, ukuvelisa, ukulawula nokuthumela iindaba. I-MAM kuye kwafuneka ivele kwisixhobo esinokuthi nje sibambelele kulwazi luye kwelinye elifuna ukuqonda umxholo ongasemva kolo lwazi.
Namhlanje, ukuze i-MAM isebenze ngaphandle komthungo, kufuneka iqonde izakhono ezifumaneka kulondolozo olungaphantsi. Impendulo apho ihlala khona imithombo yeendaba kufuneka iqokelelwe ngokuchasene noko abasebenzisi bafuna ukwenza kuyo ukuhambisa ukuhanjiswa komsebenzi okuhambisa amanqanaba amatsha emveliso. I-MAM kufuneka isombulule iingxabano kunye neengxaki ngexesha lokuhamba rhoqo komthengi ngelixa igcina ukuguquguquka kokusebenza ngeendlela ezintsha kwixesha elizayo, okanye xa iimfuno zitshintsha ngequbuliso. Ukukhangela okulula kwesiqwenga seendaba kunokuhambisa imethadatha, isinxibelelanisi kunye nolunye ulwazi ukukuxelela ukuba ngaba yimithombo yeendaba oyifunayo okanye hayi. Kwenzeka ntoni elandelayo kufuneka sisebenzise le nto ufuna ukuyenza, apho ukhoyo nokungaphezulu.
Ukuba ufuna ukusebenzisa amajelo osasazo kwaye imithombo yeendaba ikwindawo enye yemveliso, yonke into ekufuneka yenziwe yi-MAM kukubonisa kwimithombo yeendaba kwaye uhambe. Nangona kunjalo; Ukuba ukwindawo enye kwaye imithombo yeendaba igcinwe efini, okanye kwindawo yesibini, i-MAM kufuneka ilandele isethi yemithetho yeshishini exhasa into ekufuneka yenziwe. Ngaba uyafuna ukuhambisa imithombo yeendaba kwindawo yakho? Ngaba ufuna uhlobo lwommeli? Ngaba ufuna yonke imidiya ephezulu yesisombululo okanye ukhetho lwayo? Iimpendulo kule mibuzo kunye neminye zichaza ukuba isisombululo se-MAM sikwenzela ntoni emva kwesigcawu. I-Primestream ine-injini eyakhelwe-ngaphakathi kwimithetho ukwenza iseti yenkqubo ukuba icwangciseke kwaye ineenkcukacha-abanye abathengisi bayayicombulula le ngxaki ngeendlela ezahlukeneyo.
Unxibelelwano phakathi kwenkqubo ye-MAM kunye nesisombululo sokugcina kufuneka siqwalasele isantya, indawo, indlela kunye nobuchule bokuzigcina ngokwalo, kodwa ubudlelwane phakathi kwendawo yogcino nalapho luhlala khona kukuqwalaselwa ekufuneka inkqubo ye-MAM ilawule. Kubalulekile ukuba le nkqubo iqonde usetyenziso kunye nenqanaba losasazo kwishishini liphela, ukuze indawo yokugcina ilawulwe. Nokuba ukugcinwa kusemgangathweni okanye kufikeleleka kangakanani na kukho isidingo sokuphatha amajelo eendaba ngendlela yokuba iimpinda zigciniwe kwaye iindaba zishukunyiswe apho kwaye kugqitywe khona inkqubo, ngokuchasene nokuba nesidubedube esiya kubakho ngenxa yomsebenzisi ngamnye okanye iSebe eli lithathe isigqibo malunga nendlela yokulawulwa kwenkqubo.
Ngelixa i-MAM kunye nokuGcina kuhlala iitekhnoloji ezimbini ezahlukileyo, zidityaniswa ngokudibeneyo ukuze abasebenzisi bangasazithathi njengezahluli. Ukugcinwa kwento kungumbala wokugqibela wokwazi ngqo ukuba yeyiphi imidiya yakho, kwaye ukude nefolda yokuhamba komsebenzi ukuba abantu abaninzi baqala ngabo. Abantu basakhangela ulwazi ngeendlela ezimbini: bayazi ukuba iphi kwaye bafuna ukuya ngqo apho ukuze bafumane into abayifunayo, okanye bayikhangela besebenzisa metadata abavakalelwa kukuba baya kuvelisa iziphumo ezichanekileyo.
Indlela yokuqala ekhokelele abantu ekwakheni izakhiwo zencwadi eneenkcukacha ezazifuna ukulandela ngokuqinileyo ukugcina ucwangco, yesibini yaba yindlela izisombululo zeMAM zandisile ubuchule bethu. Ngoku sibona iinkqubo ze-MAM ezineefolda ezibonakalayo ezivumela abasebenzisi ukuba baqokelele umxholo kwaye bawubeke apho bafuna ukuba ube khona, kodwa ezi "ndawo" azihambi ngokwenyani kwimidiya. Ngechibi lokugcina kunye nesakhiwo esirhuqwayo, uninzi lwezithintelo ezazisisiphumo sezithintelo zeziseko ezingokwenyama ezakhiwe phezu kwazo ziye zasuswa. Njengoko itekhnoloji iqhubeka nokubonelela ngezinye iinketho, siya kuqhubeka nokwakha ukuguquguquka okungakumbi kwizisombululo esizincedayo. Siyaqhubeka nokubona ukuba abathengi bahlala befumana imiceli mngeni emitsha, ukuvela komsebenzi, kunye nezibonelelo esinokubanceda bazame ukuzifezekisa.
Ukucingisiswa kwe-IBC2019 - Oktobha 5, 2019
Ingqungquthela ye-StreamGeek ibhekiswa kwiSixeko saseNew York - Oktobha 1, 2019
UGraham Chapman uVikelelwa kuMhleli Iintetho kunye nemisrya yoGcino TVU Networks	2019-08-06
Previous: Iimveliso ze-TSL zivelisa uPhuculo lwamva kuPlatifomu yoHlolo loMsindo kwi-SAM-Q kwi-IBC 2019
next: I-Zixi: Ukukhuphela ngokukhuselekileyo ividiyo ePhilayo, yeNqanaba losasazo ngaphezulu kwe-IP